sevha $ 300 paapuro & apos; s macbook pro (15.4 ', 2018) ine Intel core i7 processor, bata bhar, 16gb ram, 512gb ssd
Kuru Nhau & Ongororo Sevha $ 300 paApple & apos; s MacBook Pro (15.4 ', 2018) ine Intel Core i7 processor, Bata Bhawa, 16GB RAM, 512GB SSD
Apple 15.4 'MacBook Pro ine Kubata Bhawa (2018, Space Grey, Sirivheri)
B & H Mufananidzo Vhidhiyo
Apple & apos; s itsva MacBook Pro malaptop ndiwo akanakisa magajeti ayo zvinosiririsa kuti anofambidzana nemaMPRP akaenzana. MacBooks inozivikanwa zvakare nekuchengetedza mitengo yakati mushe mushure mekuburitswa, saka kuona dhisikaundi pane imwe isingawanzo kuona. Kana iwe uine mari uye chinangwa chekudyara mu15.4-inch MacBook Pro kubva muna 2018, unogona kuwana ichi B & H chibvumirano chakakukodzera.
Iyo MacBook Pro iri kutengeswa ndiyo yekupinda-chikamu 15.4-inch modhi. Iyi setup inodhura $ 2,800 kana ukasarudza kuitenga kubva kuApple & apos; chitoro chepamutemo, uye nepo B & H & apos; s inobvunza mutengo we $ 2,500 ichiri kuwanda, iyo $ 300 mukuchengetedza haisi chinhu chekuregeredza chero.
Iyi Apple laptop inoratidzira 15.4 'Retina inoratidzira ine 2880 x 1800 resolution, siginecha Bata Bhawa iyo inowedzera mutsara we multitouch kutonga kumusoro kwebhodhi, iyo Intel Core i7 6 - core processor (2.6GHz inogona kukwidziridzwa kusvika 4.3GHz), 16GB yeDDR4 RAM, iyo Radeon Pro 560X GPU ine 4GB yeGDDR5 memory, uye 512GB yeSDD yekuchengetedza.
Kana chibvumirano ichi chakanakidza iwe, inzwa wakasununguka kutevera chinongedzo chiri pamusoro ichi kuB & H. Iyokutengesa kunoperana11: 59 pm ET muna Ndira 31.
google nexus zuva rekuburitsa runhare
Chirevo chinoti kuunzwa kweBeats Studio Buds kwave pedyo
Waizviziva here: 'Ok, Google' izwi rairo rinouya rakaremara paSamsung & apos; s Galaxy S6, S Izwi rakasimudzirwa panzvimbo
Maitiro ekumisikidza MTP faira yekuchinjisa modhi sekutadza pane Android 6.0 Marshmallow (mudzi req & apos; d)
Kudzivirirwa kwakanyanya: akanakisa Galaxy S5 makesi uye nhumbi dzokurwa